Liiskii Ugu Dambeeyey Ee Soo Gaabiyay Baraha Bulshada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Liiska ugu dambeeya ee Soo gaabinta iyo Soo-gaabista Baraha Bulshada
Liiska ugu dambeeya ee Soo gaabinta iyo Soo-gaabista Baraha Bulshada
Hadal dhab ah: Iyada oo dhammaan ereyada soo gaabinta ee warbaahinta bulshada la isticmaalo hadda, way adkaan kartaa in la fahmo waxa socda. Qof kasta oo aan aqoon u lahayn, asal ahaan waa luqad ka duwan.
Laakiin haddii astaantaadu u isticmaasho warbaahinta bulshada ganacsi ahaan, si habboon u adeegsiga ereyada warbaahinta bulshada iyo soo gaabinta warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa qayb ka mid ah istiraatiijiyad bulsho oo waxtar leh. Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah isbeddellada warbaahinta bulshada ee badan ee sumaddaadu ay rabto inay fahmaan.
Markaa ha werwerin haddii aad u malaysay in YOLO uu yahay macmacaan barafaysan. Mise RIGA waxa uu ahaa riyo kaliya.
Si aan kaaga caawino inaad jebiso koodhka soo gaabinta ee warbaahinta bulshada, waxaanu soo ururinay ereyada warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya, kuwa bilowga ah, iyo soo gaabinta qof kasta oo suuq geeyaa waa inuu ogaado. Waxay u kala jabeen shan qaybood:
Soo gaabinta shabakada gaarka ah
Ganacsiga gaarka ah ee warbaahinta bulshada gaabiyay iyo soo gaabinta
Soo gaabinta farsamada iyo soo gaabinta loo isticmaalo baraha bulshada
Soo gaabinta warbaahinta bulshada Gen Z iyo soo gaabinta
Soo gaabinta warbaahinta bulshada ee dareenka
Hagaag - waa markii aad kor u qaadi lahayd erayada bulsheed ee RN (hadda).
Bonus: Soo deji jaantuska jadwalka warbaahinta bulshada ee bilaashka ah, ee la beddeli karo inaad si fudud u qorsheysato oo aad u ballansato dhammaan macluumaadkaaga wakhti hore.
Soo gaabinta shabakadaha gaarka ah ee warbaahinta bulshada
DM: Fariinta Tooska ah
Kani waa nooc isgaarsiineed oo gaar ah, oo lagu dhex arko kaliya diraha iyo qaataha. Twitter, Facebook, Instagram, iyo LinkedIn, isticmaalayaashu waxay "ku dhex geli karaan" DM-yada qof iyagoo diraya fariin gaar ah.
MT: Tweet la beddelay
Tweets ka bilaabma MT waxay muujinayaan in Tweeter-ku uu tafatiray nuxurka ay dib u tweet gareynayaan ama sababo kale dartood. Tan waxa kale oo loo yaqaan Quote Tweet.
PM: Fariin gaar ah
Farimaha gaarka ah waxay la mid yihiin fariimaha tooska ah. Haddii qof uu ku weydiiyo PM iyaga, waxay si dhab ah u weydiinayaan inay u wareejiyaan wada sheekeysiga guud ee boqortooyada gaarka ah.
PRT: Retweet qayb ah
Tani waxay aad ugu egtahay RT, laakiin waxaa loo isticmaalaa in lagu tuso inaad kaliya soo xiganayso qayb ka mid ah waxa isticmaalaha kale ee Twitter uu markii hore yidhi. Waxaa laga yaabaa inaad isku ururinayso si aad u kaydsato meel faalladaada ah, tusaale ahaan.
Halkii aad garaaci lahayd badhanka retweet-ka, ama dib-u-tweetka faallooyinka, qaar ka mid ah isticmaalayaasha Twitter-ka ayaa dib u soo dhejiya tweet-ka oo ay isticmaalaan “RT” iyo gacan-ku-taagga adeegsadaha si loo sifoobo.
Soo gaabinta baraha bulshada ee caanka ah iyo soo gaabinta
AFAIK: Inta aan ogahay
Loo isticmaalo marka la wadaagayo xaqiiqooyinka ama sheegayo shay aad aaminsan tahay inay run yihiin, laakiin teebaynta AFAIK waxay muujinaysaa inaadan ahayn si buuxda u Hubaal. Ma hubtid oo ma tihid khabiir, ka dib oo dhan.
AFAIK, dadku dhalasho ahaan maaha kuwo is dhex gal ah. Haddaba, saaxiibayaal horudhac ah oo Reddit ah, dhacdo noocee ah / silsilad dhacdooyin ah ayaa kugu horseeday inaad noqoto qofka aad hadda tahay? ka AskReddit
AMA: Waxba i waydii
AMAs waa fadhiyo su'aalo iyo jawaabo bulsho ah. Shirkadaha, saameeyayaasha iyo wakiilada summada waxay ku martigelin karaan AMA-yada Twitter, Reddit, ama Facebook ama Instagram-ka qulqulka tooska ah.
Qoraal uu wadaagay Dance Project Inc (@danceprojectinc)
BRB: Dib ugu noqo
Tani waa mid ka mid ah soo gaabinta asalka ah ee warbaahinta bulshada, oo markii ugu horreysay la isticmaalo dabayaaqadii 1980-meeyadii ama horraantii 1990-meeyadii. Waxay ka timid xilligii madasha sheekeysiga, laakiin waxay dib ugu soo noqotaa bulshada marka munaasabadda saxda ah ay u yeerto.
Brb kaliya bacahayada xidhxidhaya 🤩https://t.co/b1xo3ErJfb
- Metro (@MetroUK) Diseembar 16, 2020
BTS: Muuqaallada ka dambeeya
Maya, maaha kooxda wiilasha Kuuriya ee loogu magac daray TIME's 2020 Madadaalada Sanadka. Soo gaabintan waxaa loo isticmaalaa in lagu siiyo taageerayaasheeda muuqaalka gadaashiisa ee muuqaalka astaantaada.
Soo gaabintan warbaahinta bulshada waxaa loo adeegsadaa in lagu daro macluumaad dheeri ah, lagu dul maro taangent, ama la tuuro xoogaa hadh ah.
CMV: Beddel Aragtidayda
Waxaad wadaagaysaa ra'yi, laakiin la soco in ra'yigaagu khalad yahay. Waxaad u furan tahay inaad la yeelato wadahadal madani ah. Dhab ahaantii, waxaa jira subreddit oo dhan oo u heellan doodaha CMV.
DYK: Ma ogtahay
Ma ogtahay soo gaabinta DYK inay tahay hab fiican oo aad la wadaagto xaqiiqo xiiso leh dhagaystayaashaada warbaahinta bulshada? Ku qor qoraalkaaga warbaahinta bulshada ama ku dar hashtag ahaan.
Qoraal ay wadaageen dazingfacts (@dazingfacts)
ELI5: ii sharax sida aan shan jir ahay
Soo gaabinta warbaahinta bulshada ayaa caan ku ah Reddit, waana hab lagu soo bandhigo inaad si fudud ugu sharraxayso wax adag.
ELI5: Waa maxay sababta qabowgu ugu dareemo gudaha gudaha jiilaalka inkasta oo heerkulbeeggu sheegay in heerkulku isku mid yahay? ka explainlikeimfive
FBF: Dib-u-dhac Jimce ah
Habka dib loogu tuuro wixii tagay maalinta Jimcaha.
#fbf wax kasta oo cadaab ah ayaa halkan ka socday pic.twitter.com/lM8FMxkwPb
- Topher Grace (@TopherGrace) Diseembar 11, 2020
FOMO: Cabsida laga qabo maqnaanshaha
Haddii aadan maqlin FOMO, waad maqneyd. Cuqdaddan bulsho-bulsheed waxay muujinaysaa welwelka maqnaanshaha. Xubnaha guriga waxaa jira erey-gaab ah oo JOMO, oo macnaheedu yahay Farxadda Maqan.
Keega FOMO waa dhab, waana sababta aan kugula talineyno inaad dalbato keega oo dhan. Hubi si aad u aragto keega oo dhan ee ku yimaadda cabbirro kala duwan, oo ku habboon munaasabad kasta. 😉
Waxaa dhejiyay Warshada Cheesecake Khamiista, Diseembar 3, 2020
FTW: Wixii Guul ah
Mar daacad ah, marna sarbeeb ah, marna xamaasad buuxda oo dhab ah. (Oo dhinaca kale ee qadaadiicda, FTL waxay ka dhigan tahay khasaaraha.)
- NBA TV (@NBATV) Diseembar 16, 2020
FWIW: Wixii ay ku mudan tahay
Ereygan soo gaabinta ah ee baraha bulshada waxa caadi ahaan loo adeegsadaa in lagu cabiro ra’yigiisa, laakiin qaab aan qallafsanayn ama xad-dhaaf ah. Waxay ku tusinaysaa inaadan si ula kac ah isku dayeynin inaad qof wacdo haddii uu la wadaago wax aadan u malayn inuu sax yahay. Inta badan waxaad tan ka heli doontaa Twitter-ka ama boorarka fariimaha.
FWIW, waa inaadan waligaa isticmaalin "Xaqiiqdu ma daneeyaan dareenkaaga" - xitaa haddii aad tahay Senator Maraykan ah - haddii aadan ka jawaabi karin su'aasha "Yaa lumiyay tartanka madaxweynaha 2020?" iyada oo aan wax badan ku turunturoobin, muruqasan ama " Dabagaale!"
- Jonah Goldberg (@JonahDispatch) Diseembar 15, 2020
Soo gaabintan baraha bulshada waa soo gaabinta wargelineed, mararka qaarkoodna lagu bixiyo sass.
"Waxaan ahay gabadh weyn oo samaysay nadiifinta smoothie. Gabar kasta oo weyn waa inay jidhkooda ku samaysaa waxay doonaan. Lizzo waxay u jawaabtay dhaleeceeyayaasha sheegaya inay kor u qaadayso "dhaqanka cuntada" nadiifinta smoothie-keeda. FYI, waxay samaynaysaa waxay rabto. https://t.co/mtFZpz6H0t
- InStyle (@InStyle) Diseembar 15, 2020
H/T: Talada Koofida
Mararka qaarkood kaliya HT, tip koofiyaddu waa nod toosan oo u aqoonsan isha asalka ah ee intel ama sawirka. Waxay kaloo u istaagi kartaa in la maqlo.
ICYMI: Haddii ay dhacdo in aad wayday
Habka lagu iftiimiyo waxa ku jira ama wararka laga yaabo in laga yaabo in lagu waayey blitz weligeed ah taas oo ah warbaahinta bulshada.
Qoraal ay wadaageen Maalinta Sanka Cas ee USA (@rednosedayusa)
IMO/IMHO: Fikradayda / Fikradayda Humble
Afeef ah in qof uu la wadaagayo ra'yigiisa, ma aha xaqiiqda, wax ku saabsan. Fikradaha ayaa lagu kala qaybsan yahay in H ay u taagan tahay is-hoosaysiin ama daacadnimo.
Qiimaha saamiyada Tesla ayaa aad uga sarreeya IMO marka loo eego walltreetbets
IRL: Nolosha dhabta ah
IRL waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro marka ay wax dhacaan dhab ahaantii, ma aha warbaahinta bulshada, ciyaaraha ama meel kasta oo kale oo internetka ah.
Ma daawanaysaa #SuperBlueBloodMoon #IRL mise online? Hadda way dhacaysaa, ee ha seegin! Dhulku wuxuu sii wadi doonaa inuu xannibo iftiinka qorraxda, isagoo midab casaan ah ku tuuraya dayaxa ilaa 9:07am ET/6:07am PT. Fiiri: https://t.co/r6X6SoMfLn pic.twitter.com/J9UfDz2NTF
- NASA (@NASA) Janaayo 31, 2018
LMK: Aan Ogaado
Marka qof isticmaalo soo gaabinta warbaahinta bulshada, waxay sugayaan jawaab celin ama macluumaad.
Waxaan ka dhigay gurigaygii ugu horreeyay maanta! Waa guri xeebeed, lmk sidaad u malaynayso lego
NBD: Wax weyn ma jiro
Inta badan loo isticmaalo faan is-hoosaysiin ah oo loogu talagalay shay dhab ahaantii heshiis weyn u ah qoraaga boostada bulshada.
NBD! Hadda waxaan soo qaatay xaashida xaashida ah 20 (2021). dib u dhac ku yimid masiibada dartiis si gabadhu raacdadu ay u saarnaato tababare. baaskiil wadida
NSFW: Nabadgelyo uma aha Shaqada
Midkani run ahaantii ammaan uma aha shaqada. Ka fakar laba jeer ka hor inta aanad isticmaalin - oo aad wadaagto wax kasta oo NSFW ah - akoon shirkadeed.
OC: Waxyaabaha asalka ah
Hab kale oo lagu tuso inaad wadaagto nuxurkaaga, ee ma aha qof kale fikradihiisa ama ereyadiisa. Asal ahaan ka soo horjeeda RT. Tusaale ahaan, la wadaaga sawirka Twitter ee aad qaadatay waxay noqon doontaa OC. Wadaagista sawirka qof kale ma yeeli doonto.
WFH: Ka Shaqaynta Guriga
Malaha ka Soo gaabinta warbaahinta bulshada ee 2020. Inta badan waxaa loo adeegsadaa sheekeysiga khadka tooska ah ee asxaabta, laakiin tani waxay sidoo kale faa'iido u yeelan kartaa warbaahinta bulshada.
SMH: Madaxa Ruxaya
Waqtiyada ay lama huraanka u tahay dadku waxay ogyihiin inaadan la dhacsanayn ama aanad ku qanacsanayn, oo ay suurtogal tahay, inaad madaxaaga ruxayso gadaashiisa shaashadda.
Si la mid ah IMO oo kale, soo gaabinta warbaahinta bulshada waxaa loo adeegsadaa dabacsanaan is-hoosaysiin ah, si loo wadaago ra'yi ama loo tuso inaad ku raacsan tahay ama aad diidan tahay shay.
Cadaalad ku filan tbh
Waxaa dhejiyay Cosmopolitan UK Talaadada, Diseembar 1, 2020
TBT: Khamiista dib u soo celinta
Sida FBF, tani waa maalin kale oo baraha bulshada loo qoondeeyay ee nostalgia.
#tbt waxaan ahay hal nin nasiib leh 😍
Waxaa dhejiyay Joe Montana Khamiista, Noofambar 19, 2020
TFTF: Waad ku mahadsan tahay Raacitaanka
Afka Twitterka. Soo gaabinta baraha bulshada ayaa ah qaab aad ula falgasho si togan oo aad ula falgasho qof dhawaan bilaabay inuu kula socdo arimaha bulshada.
TFW: Taasi Dareen Goorma
Waxay ka horeysaa waayo-aragnimo inta badan lala xidhiidhi karo, waxaana badanaa la socda xusuus-qor.
Qoraal ay wadaageen Snoopy iyo Kooxda Lawska (@snoopygrams)
TGIF: Allaa mahad leh waa Jimce
Sababtoo ah qof kastaa wuxuu shaqeeyaa maalmaha fasaxa ah.
2021 durba waa horumar aad u weyn 2020, iyadoo TGIF jecel #Dinosaurs ay u socdaan @disneyplus: https://t.co/l1EETZeOLd
- Collider (@Collider) Diseembar 15, 2020
TL;DR: Aad u Dheer; Ma akhrin
Caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo koobo pithy kooban oo ku saabsan shay aad ugu dheer dareenka internetka. Ama waa koobitaanka la daabacay ka hor ama ka dib sharraxaadda dheer, nooca Coles Notes ee qoraalka warbaahinta bulshada.
TLDR: Waxaan u baxay 100 mayl oo waxaan kasbaday 65 TRAIL mayl oo leh PR waqti cagahayga! 🏃🏼‍♀️💪🏼 Halkudhiggeyga 2020…
Waxaa dhejiyay Stephanie Stonebraker Axad, Disembar 6, 2020
WBW: Arbacadi way soo laabatay
Wayback Wednesday waxay ku safartaa haadka xusuusta maalinta hump.
Qoraal uu wadaagay Garsoore Lynn Toler (@realjudgelynn)
WCW: Naag Burbur Arbaca
Maalin ka mid ah toddobaadka si loogu dabaaldego haweeney is-aqoonsiisay, badanaa Instagram-ka, sabab kasta ha ahaatee! (Waxa kale oo jira MCM: Man Crush Monday.) WCW waxa loo isticmaali karaa qoraal ahaan ama hashtag ahaan.
Qoraal ay wadaagto Alexandra Gray (@alexandragreyofficial)
Soo gaabinta warbaahinta bulshada ee ganacsiga
B2B: Ganacsiga Ganacsiga
Shorthand ee shirkad leh mudnaan ganacsi oo soo wajahan.
B2C: Ganacsiga Macaamilka
Qeexayaa shirkad si toos ah macaamiisha u siisa alaabooyin ama adeegyo.
CMGR: Maamulaha Bulshada
Maareeyayaasha bulshadu waxay ku kobciyaan cilaaqaadka summada baraha bulshada. Yaan lagu khaldin maamulayaasha warbaahinta bulshada, maareeyayaasha bulshadu waxay ku hawlan yihiin oo kobciyaan bulshada shirkadda.
CTA: Wac To Action
Wicitaan-ficilku waa hadal, qoraal, ama dareen muuqaal ah. Waxay dadka siisaa dardaaran ku saabsan waxa xiga la samaynayo, hadday taasi tahay "Is-diiwaangeli," "Subscribe," ama "Na soo wac maanta."
Khayraadka: Waa kan sida loo qoro CTA waxtar leh.
EOD: Dhamaadka Maalinta
Sida caadiga ah si loo muujiyo wakhtiga kama dambaysta ah. Tusaale ahaan, "Fadlan warbixintan iigu soo celi EOD Isniinta."
EM – iimayl ii soo dir
Looma baahna in la jadwaleeyo kulan Zoom kale. Tan waxaa lagu qeexi karaa qoraal.
ETA: Qiyaasta Waqtiga Imaanshaha
Soo gaabinta la isticmaalo marka la qiyaasayo marka la keeni karo Tusaale ahaan, "Waa maxay ETA ee ku saabsan maqaalkaas aan sugeyno?"
F2F: fool ka fool
Si sax ah looma isticmaalin wax badan inta lagu jiro cudurka faafa, laakiin soo gaabintan waxaa la adeegsadaa marka la doonayo in la abaabulo kulan qof ahaaneed. Tusaale ahaan, "halkii kulan kale oo Zoom ah, aynu jadwal u samayno wax F2F."
IAM: Shirka dhexdiisa
Soo gaabinta si loo muujiyo in hadda aysan ahayn waqtigii ku habboonaa wicitaanka taleefanka ama farriimaha qoraalka ee aan dhammaadka lahayn. Mashquul baad tahay, oo malaha macmiil ayaad la joogtaa.
KPI: Tusiyaha Waxqabadka Muhiimka ah
Tilmaamaha hawl qabad ee muhiimka ah waa cabbir ballaadhan oo la socda sida waxtarka leh ee shirkadu u fulinayso himilooyinkeeda.
Khayraadka: Kuwani waa KPI-yada la raadinayo si loo cabbiro guusha summadaada.
Hooyo: Bisha ilaa Bisha
Loo isticmaalo in lagu muujiyo koritaanka ama isbeddelada tirada ee dhacaya afartii toddobaadba. Caadi ahaan loo isticmaalo isbeddelada dakhliga, isticmaalayaasha firfircoon, aragtida bogga ama isdiiwaangelinta. Waxa kale oo jira YOY: Sannad ka sannad. Tani waxay cabbirtaa cabbirro tiro isku mid ah, laakiin isbarbardhigga xogta 12 bilood halkii ay ka ahayd 4 toddobaad.
Xafiiska ka baxsan
Caadi ahaan waxaa lagu daraa iimaylka tooska ah, oo la qorsheeyay in la soo diro marka qof uu ogaado inay ka maqnaan doonaan xafiiska fasaxa, u socdaalaya shaqada, ama aqoon-is-weydaarsiga fidsan. Tusaale ahaan, "Waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo laabto Isniinta maadaama aan OOO ahaan doono saddexda maalmood ee soo socda fasaxa."
P/E: Qiimaha lagu kasbado
Saamiga ama mitirka inta badan ay isticmaalaan maalgashadayaasha iyo falanqeeyayaasha ganacsiga si ay u go'aamiyaan qiimaha shirkadda.
ROI: Ku soo noqoshada Maalgashiga
ROI waxay cabbirtaa inta faa'iido ee la keeno dadaallada la bixiyay. ROI waa mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee ganacsiyadu u qiimeeyaan guusha ololayaasha iyo hawl-galka.
Khayraadka: Baro sida loola socdo oo loo hagaajiyo ROI kaaga warbaahinta bulshada.
SEM: Suuqgeynta Matoorka Raadinta
Suuqgeynta mashiinka raadinta waa habka xayaysiinta ee internetka. Waxay ku lug leedahay iibinta xayeysiisyada matoorada raadinta si loo kordhiyo taraafikada mareegaha.
SEO: Hagaajinta Matoorka Raadinta
Hagaajinta mashiinka raadinta waxay rabta inay hagaajiso natiijooyinka mashiinka raadinta dabiiciga ah iyo kordhinta muuqaalka waxa ku jira shabakada.
Khayraadka: Baraha bulshada ma saameeyaan SEO? Waanu ku ogeysiinnay halkan
SERP: Bogga Natiijooyinka Matoorka
Kuwani waa natiijooyinka bogga lacag bixinta iyo organic ee uu soo bandhigo mashiinka raadinta ka dib marka isticmaaluhu sameeyo raadinta.
SMART: Gaar ah, Cabbiraadda, La heli karo, ku habboon, Waqti ku habboon
Soo gaabinta ganacsiga caadiga ah ee loo adeegsado dejinta yoolka. Waxay xasuusinaysaa qofka hadafyada dejinaya si uu u abuuro kuwa la raadin karo oo dhab ahaan la gaari karo.
Khayraadka: Waa kuwan sida loo dejiyo yoolalka SMART si loo dejiyo astaantaada guusha warbaahinta bulshada.
SMB: Meheradaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah
Ganacsiyada yaryar waa ganacsiyo leh in ka yar 50 shaqaale. Meheradaha dhexdhexaadka ah (ama kuwa dhexdhexaadka ah) waxay caadi ahaan leeyihiin wax ka yar 250. Waxa kale oo mararka qaarkood loo yaqaannaa shirkado yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah (SMEs).
Khayraadka: Summadaadu ma ganacsi yar baa? Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin kaa caawin doona istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada.
SMP: Baraha Bulshada
Soo gaabinta warbaahinta bulshada oo mararka qaarkood loo isticmaalo tixraaca shabakad bulsho oo gaar ah.
SMM: Suuqgeynta Baraha Bulshada
Dhaqanka kordhinta wacyiga summada iyo tixgelinta warbaahinta bulshada, iyada oo ujeedadu tahay dhisidda xidhiidhada iyo abuurista hoggaan.
SMO: Horumarinta Warbaahinta Bulshada
Hagaajinta warbaahinta bulshada waxay hubisaa isticmaalka goobaha ku habboon ee suuq-geynta sumadda. Waxay aad ugu egtahay SMM.
SoLoMo: Bulsho, Maxalli, Mobile
Bulsho, maxalli, moobaylku waxa uu qeexayaa isku xidhka moobilka iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada ee maxaliga ah ee ku koray caannimada iyada oo ay ugu wacan tahay tignoolajiyada-goobta.
SRP: Platform Xiriirka Bulshada
SRP waa xarun dhexe oo adeegsata tignoolajiyada heerka-shirkadeed si ay ugu ogolaato shirkadaha inay ku daabacaan goobo badan oo warbaahinta bulshada ah, iyo sidoo kale la socodka, dhexdhexaadinta, iyo falanqaynta.
Khayraadka: Haddii aad raadinayso tusaale SRP ah, ha sii eegin. Hootsuite waa madal xidhiidhka bulshada oo halkan waa sida loo isticmaalo.
TOS: Shuruudaha Adeegga
Shuruudaha adeeggu waa qawaaniinta sharciga ah ee isticmaalayaashu ay ku heshiiyaan inay raacaan si ay u isticmaalaan madal bulsho.
UGC: Waxa uu ka kooban yahay isticmaaluhu
Macluumaadka isticmaaluhu soo saaray waxa loola jeedaa wax kasta, oo ay ku jiraan qoraalada, sawirada, ama fiidyaha, ee ay abuureen isticmaalayaasha goob halkii ay ka ahaan lahaayeen calaamad.
WOM: Erayga Afka
Suuqgeynta ereyga-afka waxaa loola jeedaa gudbinta fayraska ee wada sheekeysiga astaanta online-ka iyada oo loo marayo dhiirigelinta firfircoon ee shirkadda.
Soo gaabinta farsamada ee loo isticmaalo baraha bulshada
API: Interface Programming Application
API waa qalabyo, qeexitaanno, iyo hab-maamuusyo u oggolaanaya soo-saareyaasha software inay hal nidaam ku taageeraan mid kale. Tusaale ahaan, Khariidadaha Google-ka waxay leeyihiin API-yo u diyaar ah biraawsarkaaga webka iyo is dhexgalka abka si shirkado kala duwani ay isugu daraan tignoolajiyada khariidadda.
CMS: Nidaamka Maareynta Maaddada
Nidaamka maaraynta nuxurku waa madal martigelinaysa abuurista iyo maaraynta nuxurka dhijitaalka ah. Nidaamyada maareynta macluumaadka caanka ah waxaa ka mid ah WordPress, Joomla, iyo Drupal.
CPC: Qiimaha Hal Guji
Sidoo kale loo yaqaan Pay per click (PPC), soo gaabintan waxa ay tilmaamaysaa qiimaha uu xayeysiiyuhu ku bixiyo guji kasta oo lagu kasbado olole.
CR: Heerka beddelka
Sicirka beddelka waxa uu cabbiraa boqolleyda dadka tallaabo ka qaaday ololahaaga sida aragtiyaha, diiwaangelinta, soo dejinta, iibka. Beddelayaashu waa mitirka muhiimka ah marka ay timaado xisaabinta ROI.
CRO: Hagaajinta Heerka Beddelka
Tallaabooyinka la qaaday si loo hagaajiyo beddelka
CTR: Riix-iyada oo loo marayo Qiimaha
Qiimaha gujisku wuxuu ka dhigan yahay boqolleyda dadka guji xiriirka ka dib marka la soo bandhigo ikhtiyaarka.
CX: Khibrada Macmiilka
Khibrada macmiilku waxa ay tilmaamaysaa xidhiidhka uu macmiilku la leeyahay shirkadda iyada oo la adeegsanayo is-dhexgal kala duwan iyo meelo la taaban karo. Khariidaynta safarka macmiilku waa hab wanaagsan oo lagu hubinayo in macaamilku uu khibrad fiican u yeelan doono shirkaddaada.
ESP: Bixiyaha Adeegga iimaylka
Erayada fudud, ESP waa shirkad dhinac saddexaad ah oo bixisa adeegyada iimaylka, sida dirista warsideyaasha ama ololayaasha suuqgeynta. Shirkadaha caanka ah waxaa ka mid ah MailChimp, Contact Constant, iyo Drip.
FTP: Nidaamka Gaadiidka faylka
Habka wareejinta faylasha ama nuqul ka samaynta faylalka dhexdooda kombiyuutarada. Inta badan waxaa loo istcimaalaa wareejinta faylalka u dhexeeya server-ka shabakada iyo kombayutarka macmiilka. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu wareejinayo faylasha - iyo sidoo kale kuwa ugu da'da weyn, tan iyo markii ay dhacaysay xilligii hore ee internetka.
Falanqaynta Google waa madal lagu falanqeeyo mareegaha. Waxay u ogolaataa suuq-geynta inay la socdaan booqdayaasha mareegaha, tixraacyada, sicirka bounce, iyo in ka badan.
Khayraadka: Waxaan kuu sheegaynaa sida loo dejiyo Google Analytics oo u isticmaal si aad ula socoto guusha warbaahinta bulshada ee astaantaada.
IM: Fariin degdeg ah
U diraya fariin teeb ah kombayutarka qof kale isla markaaba. Tusaale ahaan, waxaad u diri kartaa IM Slack, Google's Hangout Conversations ama Skype chat.
OS: Nidaamka hawlgalka
Software-ka ku shaqeeya kombiyuutarka, tablet-ka ama casriga ah. Tusaale ahaan, marka aad hesho ogeysiis ku saabsan iPhone kaaga si aad u cusboonaysiiso 14.3, waxaad cusboonaysiinaysaa OS-ka ku shaqeeya taleefankaaga.
PV: Aragtida Bogga
Aragtida bogggu waa tirada inta booqdayaasha ah ee ku soo degay bogga shabakadda. Bogagga guud ee ra'yiga inta badan lala socdo aragtida bogga gaarka ah.
RSS: Kooban Goobta Qanisan
RSS, mararka qaarkood loo yaqaan 'Really Simple Syndication', waa qaab loogu talagalay isku-darka nuxurka shabakadda. (Taasi waxay la macno tahay waxa ka kooban hal degel ayaa diyaar u ah degel kale.) Podcasts, blogs, iyo madbacadaha waxay ku tiirsan yihiin quudinta RSS si ay ula wadaagaan xogtooda dhegaystayaal ballaaran.
Khayraadka: Fiiri Hootsuite Syndicator.
Saas: Software ka Adeeg ahaan
Software-ka adeeg ahaan waxa loola jeedaa codsiyada daruuraha ku salaysan ee ay macaamiishu ka heli karaan internetka. Waxa mararka qaarkood sidoo kale loo yaqaan "software-ka-dalbashada" ama adeegyada software lagu daray." Tusaalooyinka waxaa ka mid ah iimaylka iyo barnaamijyada kalendarka, iyo Hootsuite.
SOV: La wadaag Codka
Saamiga codku waxa uu cabbiraa cadadka soo-gaadhista ay shirkaddu leedahay marka la barbar dhigo tartamayaasheeda. Saamiga bulshada ee codka, dhinaca kale, waxay cabbirtaa soo-gaadhista summada oo ku salaysan wada sheekaysiga bulshada ee shirkadda.
UI: Interface-ka isticmaalaha
Qaybta muuqaalka ee nidaamka loo qaabeeyay isticmaalayaasha dhamaadka ah. Asal ahaan, waa halka ay ku kulmaan aadanaha iyo mashiinnada.
URL: Meeleeyaha Ilaha lebbiska
URL waa ciwaanka mareegaha caalamiga ah ee mareegaha ama bogga.
UV: Muuqaallo Gaar ah
Aragtida gaarka ah waa tirada daawadayaasha gaarka ah ee bog, muuqaal, ama muuqaal. Tusaale ahaan, haddii hal isticmaale uu sheeko ku akhriyo mareegaha 10 jeer, waxay isu diiwaan gelin doontaa 10 bog oo muuqaal ah iyo hal aragti oo gaar ah.
UX: Khibrada Isticmaalaha
Naqshadaynta dhijitaalka ah, waayo-aragnimada isticmaaluhu waxay baartaa sida ugu waxtarka leh ee dadku ula falgalaan nidaamyada sida mareegaha ama codsiyada. UX Wanaagsan waxay rabta inay fahamto qiyamka isticmaaleyaasha, baahiyaha, awoodaha, iyo caqabadaha.
VPN: Shabakadda Gaarka ah ee Virtual
Shabakad gaar ah oo siisa isticmaalaha magaciisa marka la isticmaalayo intarneedka iyadoo bixisa xiriir qarsoodi ah, oo ka soo horjeeda ku jirista shabakad dadweyne. VPN waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo si looga ilaaliyo isticmaalaha hackers ama spyware.
Gen-Z gaabayaasha warbaahinta bulshada
Inaad awood u yeelatid inaad kula xiriirto Gen Zers arrimaha warbaahinta bulshada. Jiilkani waxa uu leeyahay awood kharash-garayneed oo ka badan $143 bilyan gudaha Maraykanka, qiimeeya shakhsi-nimada, lacagtoodana dhig halka ay qiyamka ku jiraan. Haddaba, sidee baad ugu suuq geyn kartaa?
Mararka qaarkood, si taas loo sameeyo, waa inaad ku hadashaa luqadooda. Waa kuwan soo gaabinta warbaahinta bulshada ee Gen Z uu hadda isticmaalayo.
Haddii aad haysato 411, waad garanaysaa waxa jira.
AF: Sida F–––
Intaa waxaa dheer in xooga la saaro, ie waan gaajaysanahay AF.
AFK: Ka fog kiiboodhka
Waxaa loo isticmaali jiray in lagu ogeysiiyo dadka kale inay jiri karto xoogaa dib u dhac ah oo ku saabsan ka jawaabista fariintooda sababtoo ah, si fiican, hadda kuma joogto kiiboodhkaaga ama hadda waxaad tahay offline.
BAE: Qof kasta ka hor
Eray kalgacal leh oo loogu talagalay qof saaxiibkiis, saaxiibtiis, ama burburin.
BC: Sababtoo ah
Sababta BC way fududahay.
BFF: Saaxiibada ugu Wanaagsan abid
Soo gaabinta muujinaya qof waa saaxiib aad isugu dhow. Sida, ugu fiican.
FFS: Waayo, F–– sababtoo ah
Kaliya xanaaq guud.
FML: F––- Noloshayda
Inta badan waxaa la isticmaalaa ka hor ama ka dib sheeko nasiib darro ah.
Habka qofka lagu jeexjeexo labadiisa senti.
RIGA: Waa kan ugu wanagsan waqtiga oo dhan
Soo gaabintan warbaahinta bulshada ayaa aqoonsata kuwa ugu wanaagsan goobahooda. Qof kastaa ma noqon karo RI. Tusaale ahaan, Simone Biles waa Gymnastic GOAT.
Qoraal ay wadaageen Uber Eats (@ubereats)
HMU: Kor ii dhufo
I soo wac, la xidhiidh, dhex gal DM-kayga, iwm.
IDK: Ma garanayo
Haddi aanad garanayn waxa ay tani ka dhigan tahay, IDK sida laguu caawiyo.
ILY: waan ku jeclahay
Mararka qaarkood sidoo kale waxaa loo qoraa sida ILU. Sidoo kale la aqbali karo waa qalbiyada iyo dhunkashada emojis.
Inta badan waxaa loo adeegsadaa golayaasha iyo kooxaha meesha wax lagu weyddiisto, la iibiyo, ama la isku dhaafsado.
JK: Kaliya kaftan
Wax ku darsiga waxtarka leh ee marka kaftanku aanu muuqan.
Ku dhejinta sheekooyinka abka Wendy.
jk cidna taas ma waydiin. pic.twitter.com/AqIA0o1C2V
- Wendy's (@Wendys) Noofambar 18, 2020
JTM: Kaliya Rasuulku
Shorthand si aad u muujiso inaadan ahayn isha macluumaadka aad wadaagayso. Inta badan waxaa loo isticmaalaa kooxo iyo boorarka fariimaha.
Habka loo yiraahdo, "qabow" ama "dhammaan wanaagsan" ama "Waan helay." Laakiin markaad garaacdo KK, waxaad muujinaysaa inaad ka qabowday go'aankaas. caadi baad tahay
LOL: Qosol Qosol Badan
Sababtoo ah ma maqli karno qosolkaaga internetka.
LMAO: Qosolkeyga A– Off
Waayo marka sida caadiga ah loo qoslo ma gooyo. Ama marka ay wax jiraan run ahaantii qosol badan.
Qoraal ay wadaageen Thirty AF (@iamthirtyaf)
MRW: Falcelintayda Goorma
Soo gaabinta warbaahinta bulshada oo inta badan lagu lammaaniyo sawir ama GIF si loo muujiyo sida aad wax u dareemayso.
Kaliya iska illow.
NYT: Magaca ganacsigaaga
Loo isticmaalo kooxaha iyo golayaasha meesha wax-iswaydaarsiga lagu sameeyo. Waxay dad badan marin habaabisay inay u maleeyaan in New York Times ay ku jirto baahi aad u sareysa.
Obvs: Sida iska cad
Obvs wuu socdaa isagoon odhan.
OH: Waa la maqlay
Waxay ka horeysaa xigasho toos ah ama odhaah toos ah oo laga soo qaatay dhegeysiga.
Ama "Oh My Goodness" sidoo kale wuu shaqeeyaa.
Waxaa loola jeedaa in qof imanayo IRL.
Fadlan, sans shaqal.
PSA: Ogeysiinta Adeegga Dadweynaha
Habka lagu baahiyo fariinta loo arko inay qiimo u leedahay dadweynaha guud.
Waxaad waydiisatay #PSA wax ku saabsan isticmaalka xad dhaafka ah ee laydhka hore ee laydhka.
Weydii oo hel; Ku raaxayso!#RoadSafety pic.twitter.com/rdofyNsmIB
- Cst. Marc Taraso (@CstTaraso9345) December 6, 2020
Niyad-waqtiga dhabta ah, ie "Si aad u gaajeysan RN." Waxaad sidoo kale weydiin kartaa qof WYD RN? (Turjumi: Maxaad samaynaysaa hadda?)
ROFL: Dul Dul Maraysa Dabaqa Isagoo Qoslaya
Shahaado buuxda oo ka sareysa LMAO.
SRSLY: Dhab ahaantii
Si aad u daran.
TIL: Maanta waan bartay
Furitaan lagu wadaagayo xoogaa aqoon cusub, oo laga soo qaatay golaha Reddit ee isla magaca ah.
TIL: Ceebaha inta badan loo yaqaan caarada lugaha dhaadheer ee aabaha maaha caaro. Waa Opiliones iyo sidoo kale loo yaqaan beeralayda. Waxay sidoo kale yihiin arachnids, laakiin waxay aad ugu dhow yihiin dabaqyada. Sidaa darteed, ma soo saaraan sun ama xariir, sidoo kale ma laha faashado, oo gebi ahaanba waxyeello uma laha kuwa maanta la bartey.
TMI: Xog aad u badan
Waxaa la isticmaalaa ka hor inta aan la bixin macluumaad badan (sida "tani waxay noqon kartaa TMI, laakiin..."). Ama inay u sheegaan qof ay qabaan: "Taasi waa wax xun! TMI!”
TTKU: Isku day inaad sii wadato
Badanaa waxaa loo adeegsadaa si aan macquul ahayn si loogu yeero qof marka uusan aad ugu degdegin inuu fahmo kaftan ama xaqiiqo.
TY: Waad ku mahadsan tahay
WBU: Ka waran adiga
"Aad baan u fiicanahay, WBU?"
WDYM: Maxaad uga jeedaa
Soo gaabinta si ay kuu tuso in aadan gabi ahaanba helin waxa hadda socda. Waxaad u baahan tahay qof kuu caddeeya.
WTF: Waa maxay F–––
Dhab ahaantii, WTF.
YOLO: Hal mar oo kaliya ayaad nooshahay
Dhowr sano ka hor, YOLO wax badan ayaa loo isticmaalay si loo tuso inaad ku nooshahay noloshaada ugu fiican. Hadda, qaabka dhabta ah ee Gen Z, waxaa inta badan loo adeegsadaa si kadis ah.
YW: Waad ku soo dhowdahay
Ha sheegin, adigoo isticmaalaya xarfo badan intii loo baahdo.
Maamulayaasha warbaahinta bulshada ee halkaas ka jira ayaa og in ereyada soo gaabinta ee warbaahinta bulshada ay asal ahaan yihiin luqad kale. (Gaar ahaan marka aad ku darto dhammaan qeexitaannada warbaahinta bulshada waxaad u baahan tahay inaad sidoo kale ogaato!)
Laakiin maaha mid ay adag tahay in la barto. Dhab ahaantii, waxaad tixgalin kartaa liiskan xaashida khiyaamada soo gaabinta Ingiriis-ilaa-bulsheed. Lagu calaamadeeyay qaamuuska warbaahinta bulshada, waxaad si faseexa u ahaan doontaa waqti yar ka dib.
DYK Hootsuite wuxuu ka dhigayaa SMM mid sahlan oo degdeg ah? Jadwal u samee, samee, oo daabac qoraalada FB, IG, LI, TW, iyo YT dhamaantood hal dashboard. Srsly! Isku day bilaash rn.
Sida loo shaqsiyeeyo WooCommerce ee Macaamiisha Qiimaha leh
Sida Badan Loo Tafatiro Alaabta WooCommerce